Golaha Shacabka oo maanta si fiican uga dooday Hindisaha Sharciga Shirkadaha Ganacsiga – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo maanta si fiican uga dooday Hindisaha Sharciga Shirkadaha Ganacsiga
Golaha Shacabka ayaa maanta Aqrintii Labaad marsiiyey Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga. Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maxamuud Beene-beene, ayaa u sheegay golaha in sharcigaan uu difaacayo, dhiiragelinayana, ganacsiga xorta ah. “Waa shuruuc guud oo qof kasta lagu dabaqayo” ayuu yiri Xildhibaan Beene-beene.
Laakiin, xildhibaannada oo aad uga dooday sharcigaan ayaa meelo badan su’aalo ka keenay. Waxay qaarkood soojeediyeen, aqrintooda hindisaha kadib, in meelaha qaar la waafajiyo Dhaqanka iyo Shareecada Islaamka, sida da’da cidda ganacsan karta, oo uu hindisahani sheegayo iney tahay ciddii ka weyn cimriga 18 sano.
Sababta uusan hindisahan u ogolaaneyn in qofkii ka yar 18 sano uu ganacsado ayuu Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maxamuud Beene-beene, ku macneeyey iney tahay arrin dastuuriya oo aysan iyagu waxba ka qaban karin (dastuurka ayey ku qoran tahay in da’da qaan gaarka dalka ay tahay 18 jir).
Xildhibaan Beene-beene waxa uu sheegay inuu sharcigani saameynayo cid kasta (ganacsadaha iyo iibsadahaba). Laakiin, waxa uu yiri “Ganacsatada ayuu aad u saameynaa”. Mid ka mid ah sababaha uu sharcigaan u sameysmayo ayuu ku sheegay in ay tahay in nuucyada ganacsiga kala duwan lagu ilaaliyo qiyamka, dhaqanka, bad-qabka iyo waxa ay shacabku u aaminsan yihiin caqiidda ahaan.
“Wasiirka ayaan kala hadleynaa in aan ganacsiga lacag joogto ah oo diiwaangelin ah laga qaadin” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo kulanka golaha soo xiray, ayaa ugu yeeray xildhibaannada in ay Guddiga Ganacsiga ee Golaha ugu gudbiyaan fekradahooda qoraal ahaan.
“Xildhibaannada waxaan ka codsaneynaa in haddii ay qoraal hayaan ay guddiga ku wareejiyaan” ayuu yiri Guddoomiye Mursal. “Wixii aan waafaqsaneen dastuurka, guddigu waa inuu dib ugu soo celiyaa golaha” ayuu hadalkiisa raaciyey, waxa uuna markaas kadib soo xiray kulankii golaha. Balse, hindisaha sharcigaan waxaa u harsan Aqrin Saddexaad, kadib waxa uu goluhu gelin doona cod.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo dhex-dhaxaadin kawada Wanlla-Wayn